Super Guide hahafantarana sy hanatsarana ny Wi-Fi an-tranonao. | Vaovao IPhone
Juan Colilla | | Vaovao IPhone, Apple products, Fampianarana sy torolàlana, maro
Ndao ekena izany, raha tsy mipetraka amin'ny tanàna lehibe ianao na amin'ny toerana somary be olona dia azo inoana fa tsy mankafy optika fibre ao an-tranonao ianao, ary na dia mankafy azy aza ianao, inona no tena azo inoana fa ny router nomen'ny mpandraharaha dia tsy miankina amin'ny tambajotranao, mainka ny fitaovan'ny Apple.
Ny fitaovana IOS sy Mac dia nanatsara ny fantsom-pifandraisana tsy misy tariby nifandimby nifandimby, ka hatramin'ny nifandimby dia nifanaraka ny fenitra farany farany amin'ny fifandraisana tsy misy taribyMiresaka manokana momba ny fifandraisana Wi-Fi sy ny tarika 5GHz miaraka amin'ny fenitra 802.11ac izahay.
Araka ny hitantsika amin'ity famaritana ity, manomboka amin'ny iPhone 6 sy 6 Plus, ny fenitra maoderina indrindra dia nanomboka notohanana 802.11acNa izany aza, manana hafetsena io ary tsy nisy izany raha tsy tamin'ny iPhone 6s sy 6s Plus (sy iPads avy amin'ny Air 2) izay nampidiriny Teknolojia MIMO (Multiple Input Multiple Output) izay manatsara be ny hafainganana amin'ny fahafahan'ny data transfer amin'ny alàlan'ny fananana antennas samihafa handefasana sy handraisana fonosana miaraka.
Amin'ny ankapobeny, raha tsy mipetraka amin'ny faritra toy ireo efa nofaritako teo aloha ireo ianao, dia azo inoana fa tsy nandefa ny onjan'ny 5GHz akory ny router anao, midika koa izany fa tsy hifanaraka amin'ny fenitra 802.11ac, ka noho izany be tokoa tsy ho afaka hankafy ny hafainganam-pandeha avo lenta azo atao ianaoIzany no antony anazavantsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny teboka teknolojia tsirairay avy ary inona ny teboka tokony horaisinao rehefa mividy router.
1 Inona no dikan'izany amin'ny tarika roa? 2'4Ghz na 5GHz
1.1 2GHz matetika
1.2 5GHz matetika
2 Izao dia miankina amin'ny fenitra Wi-Fi, 802.11 inona?
3 Fanamboarana taratra, mpamily fiara hiady
3.1 Ny fanaovan-jiro tsy natao ho an'ny rehetra
3.2 Tombontsoa azo avy amin'ny famolavolana
3.3 Fitaovana famolavolana taratra
4 NAS (fitehirizana miraikitra amin'ny tamba-jotra)
5 Smart QoS, angamba ny endri-javatra sarobidy indrindra
5.1 Laharam-pahamehana amin'ny fifamoivoizana:
5.2 Fiantohana bandwidth farafaharatsiny:
6 Fehiny farany
7 Mpandeha voatondro
Inona no dikan'izany amin'ny tarika roa? 2'4Ghz na 5GHz
Ara-dalàna tanteraka izany raha miaraka amina isa sy litera maro dia maro 802.11 a / b / g / n / ac, be tokoa MIMO ary maro be GHz Andao hiafara amin'ny korontana ary ireo izay mahatakatra ny kely indrindra dia kivy, saingy izany rehetra izany dia tsotra kokoa noho ny toa izy, hiezaka hanazava izany amin'ny fomba tsotra aho.
Alohan'ny hanombohantsika hiresaka momba ireo tarika misy sy ny toetran'ny tsirairay dia tsy maintsy fantarintsika hoe inona ireo tarika Wi-Fi. ny Tarika Wi-Fi dia ireo zatra izay andefasan'ny mpandefa ny onja Wi-Fi ho raisin 'ny mpandray, ho an'ny fifandraisana amina tarika hatao, ny mpandefa sy ny mpandray dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny tarika tadiavina
Tsy maintsy ho toy ny sinoa ilay izy taminao, sa tsy izany? Andao haka ohatra iray; Azo lazaina fa ny angon-drakitra na fonosana data (ny fampahalalana mivezivezy amin'ireo haavo ireo, amin'ny alàlan'ny Wi-Fi anay) dia azo ampitahaina amin'ny fiaramanidina, ary ny fantsom-pifandraisana na ny fatrandrahana samihafa dia mitovy amin'ny hahavon'ny sidina.
Ka andao lazaina fa ny bandy 2GHz dia haavon'ny sidina manakaiky ny tany ary ny 4GHz dia avo kokoa, inona no dikan'izany? Maro ny fiaramanidina tranainy tsy afaka misidina amin'ny haavo iray (fitaovana efa somary antitra no tsy mifanaraka amin'ny tarika 5GHz) noho izany dia tsy maintsy manidina ambany izy ireo raha te-hifindra, mifangaro amin'izany ny orinasam-panidina maro izay manana fiaramanidina efa antitra. (trano sy orinasa maro no manana router izay tsy miasa afa-tsy amin'ny tarika 5GHz), izany no mahatonga ny habakabaka ivoaran'ny sidina feno fiaramanidina ka sarotra ny manidina tsy misy lozam-pifamoivoizana. Ireo fitaovana dia mifanaraka amin'ny tarika 2GHz) ary misy vitsy kokoa ny fiaramanidina manidina ao, midika izany fa maro ny lozam-pifamoivoizana, toerana tsy madio no iorenan'ny fiaramanidina ary tsy mahasosotra azy ireo.
Angamba ianao somary very hevitra tamin'ny fampitahana ny fiaramanidina, mba hahitana raha aorian'izay dia mora kokoa aminao ny mandevona ny tena teôria; Ny ankamaroan'ny router tsy dia maoderina hampielezana ny tarika 5GHz, midika izany fa amin'ny sakana iray dia mety hisy mangingina (tsy mihoapampana) mpandeha 30 mamoaka onja Wi-Fi amin'ny haavo 2GHz ary vintana 4 no handefa izany ao amin'ny tarika 3GHz (raha tsy mipetraka amin'ny tanàna lehibe ianao izay naneren'ny fahatongavan'ny fibre ny mpamily maoderina kokoa), inona no mitranga avy eo? Eny, ireto mpanafatra Wi-Fi 30 ireto dia hiteraka saturation ao amin'ny tarika, azo hamarinina amin'ny fanaovana scan amin'ny solosaina finday na finday avo lenta ary ny fahitana ny lisitry ny tamba-jotra Wi-Fi tsy manam-petra eo am-pelatanantsika, satria misy izany maro amin'ireo tambajotra ireo no mifanelingelina ka miteraka fanelingelenana ary, amin'ny tranga maro, ny fatiantoka famantarana tsy tapaka (tsy filaminana eo amin'ny tamba-jotra).
Izany no antony maha-sarobidy ny tarika 5GHz, tarika izay tsy dia misy fanampiny intsony ankehitriny, fa tsy ny router ihany no mandefa ny tarika 2GHz, telefaona finday ary na ny microwave aza mamoaka fambara amin'ity fahita matetika ity, midika izany fa raha mampandeha ny mikraoba ianao, ny fitaovana manakaiky azy dia hanana fahasahiranana bebe kokoa amin'ny fahazoana fifandraisana matanjaka amin'ny router, ary na eo aza ny zava-misy dia afaka mandefa onjam-peo 11 amin'ny fantsom-pifandraisana 2 samihafa ny router. ny tarika 4GHz (azo lazaina fa samy hafa ny haavony ao anatin'ny habakabaka), na eo aza izany ary miova fantsona ho azy ireo ny router mba hisorohana ny fanelingelenana, tsy io ihany no router izay manao azy, noho izany dia mitohy ao aminy isika ary dia voahodidin'ny fitaovana mandeha amin'ny tarika 2GHz.
Etsy ankilany, ny tarika 5GHz tsy vitan'ny manana fitoniana lehibe kokoa tsy dia manelingelina firy, fa manohana hafainganam-pandeha avo kokoa ny famindrana angona, raha ny bandy 2GHz dia manohana farafahakeliny 4Mbps amin'ny fenitra maoderina indrindra ao aminy, ny tarika 450GHz dia afaka mahatratra ny hafainganam-pandehan'ny 5Mbps, mihoatra ny avo roa heny, tsy isalasalana fa fanatsarana miavaka raha oharina amin'ny tarika hafa manana tombony ny tsy manana ny olana amin'ny fitsabahana amin'ny microwave na fitaovana hafa.
Na izany aza tsy volamena ny zava-drehetra, ny tarika 5GHz dia manana faritra fohy kokoa ary manana fahasahiranana bebe kokoa izy amin'ny fidirana amin'ny vato misakana ara-batana toy ny rindrina, azo lazaina fa ao anatin'ireo toe-javatra ireo ihany, ny onja avoaka ao amin'ny tarika 5GHz dia manana 1/3 amin'ny elanelan'ny iray navoaka tao amin'ny tarika 2GHz, izany hoe, fa ny tena atolotra androany dia ny fampiasana fitaovana mifanaraka amin'ny «Dual Band».
Araka izany, ny tombony sy fatiantoka an'ny tarika tsirairay dia ireto manaraka ireto:
Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana taloha sy vaovao.
Miditra amin'ny vato misakana.
Matetika dia mora ny antennas-dry zareo.
Fanelingelenana be dia be, na dia amin'ny fitaovana ao an-trano aza.
Hafainganana amin'ny fampitana data.
Hafainganana famindrana avo.
Fanelingelenana kely, tsy voakasiky ny fitaovana ao an-trano.
Fantsom-pifandraisana lehibe kokoa.
Tsy dia miditra amin'ny sakana ara-batana.
Matetika no lafo kokoa ny antenantenan'izy ireo.
Fifanarahana amin'ireo fitaovana vaovao (ohatra, avy amin'ny iPhone 5 na avo kokoa).
Izao dia miankina amin'ny fenitra Wi-Fi, 802.11 inona?
Eto dia manana fenitra samihafa isika, ny tsirairay dia vaovao kokoa noho ny teo aloha, miaraka amin'ny tombony sy fatiantoka misy eo aminy, ny sasany vaovao dia mifanaraka aoriana Miaraka amin'ny fitaovana natao ho an'ny lehibe kokoa, ny sasany mampiasa ny tarika 2GHz, ny sasany ny tarika 4GHz ary misy aza ny mampiasa ny roa (ny faharoa dia antsoina hoe Dual Band), misy totalin'ny 5, hodinihintsika araka ny filaharany ny rehetra. , manomboka amin'ny antitra ka hatramin'ny maoderina.
Tamin'ny 1997, ny Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE amin'ny teny Anglisy) dia namorona ny fenitra voalohany amin'ny teknolojia Wi-Fi, ity dia nahazo ny anarana 802.11 ho an'ny vondrona nanara-maso ny tetikasa, indrisy, ity fenitra ity izay tranainy hafainganam-pandehan'ny famindrana data 2 Mbps, na mazava kokoa ary ho azonareo rehetra, dia mitovy amin'ny 0MB / s, satria ny 25 Mbps dia mitovy amin'ny 1MB / s, amin'ny endrika rehetra hampiasainay ity fomba farany ity fandrefesana izany mba hahamora anao ny zatra ilay hevitra.
Tamin'ny taona 1999, ny IEEE dia nanitatra ny fenitra amin'ny iray vaovao antsoina hoe 802.11b, ity fenitra vaovao ity dia nampiasa ny fantsona 2GHz tsy voafehy nahatratra ny hafainganam-pandeha lehibe indrindra 4MB / s, zavatra mitovy amin'ny ankamaroan'ny fifandraisana tariby ankehitriny. Amin'ny andro.
Ity fenitra ity dia mihevitra ny fihenan'ny vidiny rehefa mampiasa ny tarika tsy voafehy an'ny 2'4GHz, na izany aza dia miteraka fanelingelenana amin'ny telefaona finday, fitaovana mikraoba na fitaovana hafa mampiasa io matetika io, azo sorohina ireo fanelingelenana ireo amin'ny alàlan'ny fametrahana ny famantarana Wi-Fi toerana famoahana amin'ny toerana stratejika sy avo.
Ny vato misakana dia azo sorohina mora foana amin'ny alàlan'ny fametrahana tsara ny router.
Hafainganana farany ambany.
Ny fitaovana ao an-trano dia mety hanelingelina ny famantarana rehefa mampiasa ny tarika 2GHz.
Ity fenitra ity dia noforonina niaraka tamin'ny 802.11b, izy no voalohany nampiasa ny tarika 5GHz voafehy, na izany aza dia nitaky vola be ary nahatonga azy tsy ho malaza amin'ny 802.11b.
802.11a dia navotsotra tamin'ny tontolon'ny orinasa, ny bandwidth-ny dia hatramin'ny 6MB / s, hafainganam-pandeha lehibe, na eo aza izany dia 75b no niafarany nanjaka tamin'ny tranontsika.
Hafaingam-pandefasana angon-drakitra avo lenta (6MB / s na inona no mitovy, 75 Mbps).
Satria ny tarika 5GHz dia tarika voafehy, sorohina amin'ny alàlan'ny fitaovana hafa tsy nahazoana alalana.
Sarany lafo kokoa.
Fahasarotana lehibe noho ny vato misakana.
Tamin'ny 2002 sy 2003 nisy fenitra vaovao antsoina hoe 802.11g navoaka, tonga hanambatra ny tsara indrindra 802.11b sy 802.11a, 802.11g manohana ny fantsom-pifandraisana hatramin'ny 6MB / s ary mampiasa ny fatran'ny 75 '2GHz hahatratra ambaratonga lehibe kokoa sy fidirana amin'ny sakana, ity fenitra ity koa dia miverina miverina miaraka amin'ny 4b, midika izany fa ireo fitaovana natao ho an'io fenitra taloha io dia mifanaraka amin'ilay iray vaovao fa tsy mila manova na inona na inona.
Ny fampiasana ny tarika 2GHz dia manome fari-pahaizana sy fidirana lehibe kokoa ho anao.
Hafainganana ambony hatramin'ny 6MB / s.
Mifanaraka miverina amin'ny 802.11b.
Ny vidiny avo kokoa noho ny 802.11b.
Fanelingelenana noho ny tototry ny tarika.
Fanelingelenana ny fitaovana elektrika na fitaovana hafa.
Ny fenitra 802.11n dia fantatra amin'ny anarana "Wireless N" ihany koa, ity dia nanatsara ny hafainganana na ny bandwidth an'ny teo alohany tamin'ny fampidirana ny teknolojia MIMO (Multiple Input Multiple Output amin'ny teny Anglisy), ity haitao ity dia mampiasa antena mihoatra ny iray ho mandefa sy mandray fonosana angon-drakitra miaraka, ka manalavitra ny fahaverezan'ny sasany ary manatsara ny hamafin'ny tamba-jotra.
Tamin'ny taona 2009 dia voafaritra fa ity fenitra ity dia mety hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny 37MB / s. Ity fenitra ity dia miverina mifanaraka amin'ny 5b ary mampiasa ny tarika 802.11GHz tsy voafehy.
Hamafisina avo kokoa noho ny fampiasana antennas marobe.
Ambony noho ny fenitra teo aloha ny vidiny.
Ny tambajotra miorina amin'ny 802.11g sy 802.11b dia mety hanelingelina ny fambara.
Ny fitaovana na fitaovana hafa mampiasa ny tarika 2GHz dia mety hiteraka fahatapahana.
Ity no fenitra vaovao indrindra, mampiasa ny teknolojia Dual Band sy MIMO miaraka izy, mahatratra ny hafainganam-pandeha 162'5MB / s ao amin'ny tarika 5GHz sy 56'25MB / s ao amin'ny tarika 2'4GHz, mifanaraka aoriana izy io 802.11b, fenitra g sy n.
Ny fifanarahana mihemotra miaraka amin'ny fenitra taloha dia mamela ireo fitaovana tranainy hampiasa (tsy mankafy ny tombony rehetra) amin'ity fenitra ity.
Ny hafainganam-pandehan'ny fantsom-pifandraisana tsara indrindra na ny tarika roa tonta.
Ny fampiasana ny haitao MIMO dia mamela hamafin'ny tambajotra bebe kokoa.
Izy io dia mitambatra haingam-pandeha, elanelana tsara ary ambaratonga hafa amin'ny fidirana amin'ireo sakana sy fanelingelenana arakaraka ny tarika izay ampifandraisintsika (misy Wi-Fi 2 misaraka, iray isaky ny tarika).
Dual Band MIMO dia mitaky vidiny lafo.
Ny tarika 2GHz dia mbola voakasik'ireo toetra mampiavaka azy io.
Ny tarika 5GHz dia mbola tsy manana ambaratonga azo ampitahaina amin'ny an'ny 2GHz.
Fanamboarana taratra, mpamily fiara hiady
El famolavolana teknolojia izy io, raha ny tena izy, mamela ny fampiasana antennas Wi-Fi mahomby kokoa. Ireo mpamily izay manana fantsom-pifandraisana dia ho afaka hahafantatra ny toerana misy an'ireo fitaovana mifandray amin'ny tambajotrany Wi-Fi sy ampifantohy amin'izy ireo ny famantarana fa tsy mamoaka onja omni-direction ary miandry azy hahatratra ny mpanjifa.
Mba hanomezana hevitra anao, ny antena tsy misy fantsom-baravarana dia azo ampitahaina amin'ny jiro sy ny iray miaraka amina taratra laser, rehefa misy jiro manazava mitovy amin'izay manodidina azy, mamoaka hazavana amin'ny lafiny rehetra, laser kosa dia mampifantoka azy tara-pahazavana mazava tsara mankany amin'ilay teboka kendrentsika.
Ny fanaovan-jiro tsy natao ho an'ny rehetra
Ity haitao ity dia nampidirina tamin'ny fenitra 802.11n, na izany aza, rehefa nanao izany ny IEE, dia tsy nilaza mazava ny fomba tokony hampiharana an'ity haitao ity amin'ity fenitra ity, vokatr'izany dia nisy fitaovana (router sy receivers) marobe niseho teo amin'ny tsena. miaraka amin'ny fomba samihafa hampiasana ny fampiasa beamforming, ny lesoka dia tsy nifanaraka ireo fomba ireo, noho izany dia tsy maintsy nanana router sy fitaovana iray ianao izay nampihatra io fomba io ihany mba ahafahana mifanaraka, raha tsy izany ho toy ny tambajotra Wi-Fi mahazatra.
Soa ihany, ny IEE dia tsy nanao fahadisoana mitovy amin'ny fenitra 802.11ac vaovao, ankehitriny dia misy torolàlana napetraka hanaraka ireo mpanamboatra te hampihatra an'ity haitao ity amin'ny fitaovany, amin'ity fomba ity, ny fitaovana rehetra dia mifanentana amin'ny alàlan'ny fampiasana io fomba io ihany.
Tombontsoa azo avy amin'ny famolavolana
Noho ny fitrandrahana fantsona, mahazo ny fambara izahay mba hifantoka amin'ny fitaovana na fitaovana ampiasana azy, ka hampihena ny fahatapahana sy hampitombo ny isan'ny fifandraisana.
Fitaovana famolavolana taratra
Hitanay ny tombotsoan'ity haitao ity ary amin'ny tena maha izy azy, saingy misy zava-miafina bebe kokoa ao ambadik'izany, ohatra, tsy ny fitaovana rehetra mampiasa ny fenitra 802.11ac dia mifanaraka amin'ny famolavolana trondro, mazàna ireo mpandeha be fampiasa avo lenta izay afaka mampiasa an'io haitao io.
Tsy ny mpandray rehetra no afaka mandray soa feno amin'izany dia tsy maintsy manana puce Wi-Fi manohana ny MIMOOhatra, ny iPhone 6 dia afaka mahazo mari-pamantarana avy amin'ny alàlan'ny router amin'ny alàlan'ny fenitra 802.11ac (iPhone 6 na avo kokoa dia mifanaraka amin'ity fenitra ity), na izany aza tsy afaka manondro ny router ny iPhone 6, tsy maintsy mandefa fonosana omnidirectional izy, mitranga izany satria tsy afaka "beamforming" ny iPhone 6, na izany aza ny iPhone 6s na avo kokoa, ireo iPhone sy iPad Air 2 ireo dia manana chip Wi-Fi miaraka amin'ny teknolojia MIMO izay ahafahanao manararaotra ny tombony rehetra amin'ity teknolojia ity.
NAS (fitehirizana miraikitra amin'ny tamba-jotra)
Ny router sasany dia misy port USB, ny sasany aza manana kapila mafy ao anatiny, manohana na mampiditra ny fampiasa NAS ireo mpandeha ireo, midika izany fa a fitaovana fitahirizana ary ampiasao lavitra izany.
Ohatra, ny sasany amin'ireo mpandeha haingam-pandeha avo lenta dia misy kapila mafy ao anatiny ary mamela anao hanao zavatra izay tsy mbola nisy nieritreritra router, toy ny:
Masinina: Miaraka amin'ny Mac, azonao atao ny manamboatra kapila mangatsiaka amin'ny tambajotra mba hiasa ho Time Machine, ka ahafahan'ny Mac manao kopia voafafa ao amin'io kapila mangidy io ary tsy misy tariby.
Fitoerana lavitra: Azontsika atao ny mampiasa an'ity kapila ity ho fitahirizana lavitra, mazava ho azy fa ny hafainganan'ny famakiana sy ny fanoratana dia tsy ho an'ny an'ny fitaovana fitehirizana ihany fa koa ny hafainganan'ny Wi-Fi na tamba-jotra tariby, na izany aza afaka mamindra rakitra toy ny sary isika na horonan-tsary mankany amin'ity kapila mangidy ity ary jereo azy ireo amin'ny fitaovana hafa (toy ny finday avo lenta na ny fahita lavitra) fa tsy mila misintona azy ireo.
Mpitantana Torrents: Ny router sasany aza avela hanana manager torrent aza, ity no an'ny Xiaomi Smart router 2 izay mamela anao handefa riaka any amin'ny router ary mampidina azy ireo any amin'ny fitaovanao fitehirizana nefa tsy misy fitaovana hafa mandeha.
Mpizara FTP: Ireo fitaovana fitehirizana ireo dia azo alamina mba ho azo idirana na dia lavitra ny trano aza, raha toa ka manana fifandraisana Internet ny router, dia hanana izany koa ny fitaovana fitehirizana, mba hananantsika serivisy fitehirizana haingam-pandeha haingam-pandeha (voafaritry ny kalitaon'ny ny fifandraisana nifanarahana) ho an'ny vidiny tadiavinay (nofaritan'ny toerana fitahirizana sy ny vidin'ny fitaovana) ary ny toerana tadiavinay.
Smart QoS, angamba ny endri-javatra sarobidy indrindra
QoS no fanafohezana ny Kalitao serivisy (Kalitaon'ny serivisy amin'ny teny espaniola), ity dia singa iray tena lehibe ao an-trano izay misy mombamomba ny mpampiasa samihafa.
Ohatra, raha manana olona ao an-trano ianao izay milalao lalao video an-tserasera, misy iray hafa izay matetika mijery serivisy horonan-tsary be dia be toy ny YouTube na Netflix ary / na ny iray hafa izay mampiasa fandaharana falehan-driaka, dia hipetraka ao amin'ny toe-javatra misy ny trano maro izay mampisy olana eo amin'ny mpampiasa ny fifandraisana.
Maro ny fifanakalozan-kevitra afaka mifarana amin'ny fampidirana fitaovana iray izay misy Smart QoS, ity fampiasa ity dia afaka mandray fepetra amin'io lafiny io toy ny fanaovana laharam-pahamehana ny fifamoivoizana sy / na ny antoka amin'ny fantsom-pifandraisana farafahakeliny, mba hahafantaranao tsara kokoa dia hazavaiko aminao izany:
Laharam-pahamehana amin'ny fifamoivoizana:
Si mpampiasa iray milalao lalao an-tserasera ahoana no mety ho League of Legends ary horonan-tsary hafa mijery YouTube na Netflix, ireto mpampiasa roa ireto dia hametraka fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny router, raha tsy manana QoS ity router ity dia handefa ny angon-drakitra ilaina amin'ny Internet rehefa tonga izy, tsy misy baiko laharam-pahamehana. Na izany aza, hetsika roa samy hafa ireo, mitaky latency ambany ny lalao an-tserasera, midika izany fa mila tonga haingana amin'ny mpizara ny fonosana ary haverina amin'ny hafainganana mitovy, lalao amin'ny lalao League Of Legends maharitra 1 ora iray mety mitaky fandaniana 70MB fotsiny, na izany aza ny fandefasana horonantsary avy amin'ny YouTube na Netflix dia tsy mitaky latency mitovy fa ny bandwidth sy ny hafainganam-pandeha fampidinana, ireo horonantsary manana kalitao HD ireo dia mety hiteraka MB an-jatony na fanjifana 1 na 2 GB ao anatin'ny adiny iray, roa fampiasana ny tamba-jotra izay mila filàna samihafa.
Amin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana amin'ny lozam-pifamoivoizan'ny router miaraka amin'ny Smart QoS, fantatry ny router ny hetsika ataon'ny tsirairay sy ny zavatra takian'izy ireo, amin'izany fomba izany no ahazoana antoka ny latency farany ambany ho an'ny mpampiasa milalao (izay hahafahany mifehy ny toetrany amin'ny fotoana tena tsy misy karazana fanemorana) ary fantsom-pifandraisana malalaka sy haingam-pandeha ho an'ny mpampiasa mijery horonan-tsary (izay hankafy horonan-tsary tsy misy fanelingelenana ary tsy hanelingelina ny mpampiasa voalohany).
Fiantohana bandwidth farafaharatsiny:
Ireo toe-javatra ireo dia mety hitranga amin'ny karazana mpampiasa hafa, toy ny mpampiasa izay mijery horonantsary mikoriana ary ny iray hafa izay misintona riaka, ny mpampiasa voalohany (raha tsy manana ny router miaraka amin'ny Smart QoS) dia hahita ny fomba tsy mavesatra ny horonantsarin'izy ireo ary mijaly am-piatoana satria ny mpampiasa faharoa dia mihinana ny bandwidth rehetra rehefa misintona ny riaka, azo ampitahaina amin'ny làlana iray, arakaraka ny halehiben'ny làlana, arakaraka ny habetsahan'ny fiara no afaka mandalo (bandwidth), na izany aza tsy misy Smart QoS Tsy misy milaza hoe fiara afaka mandalo aiza, dia ho toy ny lalana tsy voafehy.
Misaotra ny Smart QoS sy ny fikajiana ny fantsom-pifandraisana, ny router manana an'io fiasa io dia hanome fantsom-pifandraisana farafahakeliny ho an'ny mpampiasa tsirairay, ity mpampiasa ity dia hanana ny ampahany amin'ny lalana azo antoka mba hahafahan'ny fiarany (fonosana) mandalo azy io raha tsy misy mpampiasa hafa afaka manafika ny azy ireo. làlana, amin'izany fomba izany no ahazoana antoka fa afaka mandalo ny tsirairay ary tsy misy hanafika ny làlan'ny hafa.
Amin'ity toro-lalana ity dia ho vonona ny handinika ny toe-javatra ao an-tranonao na any am-piasana ianao, mieritreritra ny fifandraisana nifanekenao, jereo fa ny router-nao dia miankina amin'io ary na ny fitaovanao aza (na dia tsy manana router optic fiber optika aza ianao manatsara ny fifandraisanao amin'ny alàlan'ny fanatanterahana asa tsara kokoa toy ny AirPlay streaming, fitantanana ny fisintomana an'i Torrents, YouTube ary ny lalao an-tserasera mba tsy hisy hanelingelina ny hafa na hanatsara ny fivezivezena ny tambajotran-dry zareo amin'ireo faritra ao an-trano amin'ireo izay tonga tsy dia mazava loatra ).
Ny antsipiriany iray manan-danja ihany koa amin'ny fisafidianana ny router dia mety ho processeur sy RAM napetraka, fantatro fa toa mihoapampana ity fa raha ny processeur tsara kokoa an'ny router dia arakaraka ny ahafahany manapa-kevitra momba ny fifamoivoizana mandalo azy, ary arakaraka ny ananany RAM, dia vao mainka be ny fonosana hitehirizany hahafahany mandefasa tsirairay nefa tsy hitan'ny mpampiasa miadana ny fifandraisan'izy ireo.
Ny olana dia mety ho sarotra, na izany aza, ny lakileny dia ny mitady router manara-penitra amin'ny vidiny lafo, tsy ilaina ny mividy supercomputer izay mitantana ny fifandraisan'ny tranonao, na izany aza. ny router ratsy iray dia mety hanimba ny fiainanao mpampiasa.
Amin'ny Internet dia azonao atao ny mahita mpitily tsara izay mifanaraka amin'ny fenitra fifandraisana tsy misy tariby farany misy, manana NAS na mifanaraka aminy ary manana antennas marobe sy ny asan'ny Smart QoS aza, ny olana dia matetika ny mpandeha amin'ny fomban'ity fomba ity sarotra ny manamboatraNy sasany aza manana antena dummy izay tsy antsasaky ny halehiben'ny plastika mahatonga azy ireo hahita (manokatra azy ireo ny antennas maro dia voaporofo fa latsaky ny 50% amin'ny zavatra nohaniny).
Ny sasany router izay atoroko manokana Izy ireo dia:
Xiaomi Mi Wifi 2 - € 30 - Ny router mora indrindra NAS mifanentana 802.11ac MIMO Wi-Fi hitanao, entanin'ny aingam-panahy avy amin'ny Apple's Magic Trackpad, dia hahafaly ny fifandraisana an-trano rehetra. Ny router Xiaomi rehetra dia misy fampiharana ho an'ny iOS sy Android ary interface tsotra.
Seranan-tsambo - € 109 - Ny router ny Apple no mora indrindra, na eo aza ny fampiasa efa lany andro kokoa noho ny an'ny Xiamo Mi Wifi 2, misy ny olona tsy vonona ny hividy marika toa an'i Xiaomi, amin'ity indray mitoraka ity dia manana router mifanaraka amin'ny fenitra 802.11n isika, ampy ho an'ny trano maro, tsy misy mifanentana amin'ny NAS.
Xiaomi Smart Router 1 (1TB) - € 124 - Ny taranaka voalohany an'ny router mandroso an'i Xiaomi, ny voalohany ao anaty lisitra izay ahitana ny NAS amin'ny alàlan'ny default, dia misy slot eo ambaniny hampifandray kapila (misy ny 1TB iray) ary mifanaraka amin'ny sinatra, ny 802.11ac mahazatra ary SmartQoS.
Xiaomi Smart Router 2 (1TB) - € 150 - Mandroso kokoa noho ilay teo aloha (ny tsara indrindra raha ny fahitako azy) ary miaraka amin'ny NAS namboarina 1TB, ity router ity dia mifanaraka amin'ny fenitra 802.11ac, teknolojia beamforming, manager torrent, Smart QoS, backup automatique ary maro hafa . ...
AirPort Extreme - € 219 - Ny router mandroso indrindra NAS (tsy namboarina) an'ny Apple izay mifanaraka amin'ny fenitra 802.11ac, manamboatra endrika, dia manana antenitra 6 ao anaty rafitra 3X3 MIMO (3 ho an'ny 2GHz ary 4 ho 3GHz), USB Fampiharana seranan-tsambo 5 sy smartphone.
AirPort Extreme Time Capsule (2TB) - € 329 - Raha ny tena izy dia AirPort Extreme misy kapila mafy 2TB ao anatiny izay ahafahanao manao Time Machine eo an-toerana amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-Fi anao, amin'izay ianao afaka manao backup backup automatique an'ny Mac anao tsy misy tariby. .
Xiaomi Smart Router 2 (6TB) - € 539 - Ilay router Xiaomi iray ihany ao amin'ny kinova 6TB, ho an'ireo be mpitady indrindra ary izay mikasa ny hampiantrano ny horonan-tsary, sarimihetsika, sary, kopia nomaniny ho solon'izay ary ny hafa amin'ity router ity.
#Fanamarihana: Ny router Xiaomi rehetra dia manana rindrambaiko miorina OpenWRT, kinova Linux ho an'ny router. Misy fampiharana antsoina Ny Wifi-ko ao amin'ny AppStore sy Google Play izay ampiasaina hanamboarana azy ireo amin'ny finday avo lenta na ny takelaka misy antsika amin'ny teny Anglisy (ho an'ny Android dia misy kinova Espaniôla iray nadika avy amin'ny fiarahamonina ao amin'ny forum MIUI), ny interface web an'ireo router ireo dia tsy misy raha tsy ao. Sinoa Na eo aza izany, raha miditra amin'ny browser Google Chrome isika dia azontsika atao ny mandika azy amin'ny teny espaniola lavorary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Super Guide hahatakatra ny fifandraisanao Wi-Fi ary hametraka azy eo amin'ny haavon'ny iPhone, Mac ary ireo fitaovana hafa.
lahatsoratra fampahalalana sy kalitao tena tsara, saingy misy ny fanontaniana mipetraka: amin'ny fitaovana iOS dia tsy nahalala afa-tsy ny hafainganan'ny fifandraisako Wi-Fi aho, miaraka amin'ny fampiharana Air ho an'ny router an'ny Apple. misy fomba hahafantarana ny hafainganan'ny fifandraisan Wi-Fi, miaraka amin'ireo mpanamory fiara izay tsy manana fampiharana manokana? Misaotra betsaka.
Matahotra aho fa ny zavatra tokana azonao atao dia ny mikaroka amin'ny Internet ny maodelin'ny router tianao ho fantatra, indraindray dia miseho amin'ny fikirakirana tranokala izany, saingy indraindray tsy izany, ary amin'ireo toe-javatra ireo dia tsy misy fomba hahalalana antoka. azo itokisana kokoa noho ny fitadiavana ny tranokalan'ny mpanamboatra na olon-kafa manome fampahalalana momba ilay fitaovana ... Satria azoko hoe ny tianao hofantarina ny fenitra ampiasainy.
misaotra, tsy ny fenitra no tiako holazaina, satria fantatro fa ny router sy ny iPhone-ko dia a. C., ary mifandray amin'ny tarika gigahertz dimy aho. Ny zava-mitranga dia talohan'ny nampiasako ny AirPort tafahoatra, ary tamin'ny alàlan'ny fampiharana AirPort dia hitako ny fifandraisana Wi-Fi rehetra mankany amin'ny router, ary ny hafainganam-pandehan'ireo byte mega isan-tsegondra Ny zava-misy dia nomen'ny jazztel router vaovao aho, avy amin'ny 802.11 mankany C fa tsy manana fomba hanamarinana ny hafainganam-pandehan'ny rohy Wi-Fi eo anelanelan'ny iPhone sy ny router aho, ka nanontany aho raha fantatrao ny momba ny rindranasa iray milaza amiko ny hafainganan'ny rohy misy eo amin'ny router sy ny iPhone . Misaotra betsaka.
Mamaly an'i emi
Mety hiteny tsy misy dikany aho, fa ... tsy azonao ampifandraisina ve ny seranam-piaramanidina aorian'ny router Jazztel? Mety hanome anao ny serivisy izay nataonao tamin'ny AirPort io, sa tsy izany? Azonao atao koa ny mampifandray ny AirPort amin'ny toerana hafa lavitra ny trano. aiza no hisy tariby ary hampitombo ny isan'ny Wi-Fi manodidina ny trano, sa tsy izany?
Mazava ho azy, tsy fantatro raha toa ny router iray ka "hivezivezy" hafa ary hanao hadalana isika.
tsara, ny AirPort tsy ananako intsony, mety ho vahaolana izany nefa toa izany ary tsy ho vitako mihitsy ny handrefy ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisako Wi-Fi. Tsy maintsy mampifandray solosaina Windows amin'ny router aho mba hanomezany ahy ny tena hafainganam-pandehan'ny fifandraisana Wi-Fi ahy.
SerraCop dia hoy izy:
Mpinamana be, lahatsoratra tsara.
Mamaly an'i SerraCop
Misaotra betsaka 😉 Manantena aho fa nanompo anao!
Mazava ho azy, tsy haiko raha misy "router" iray hafa "router" ary ho adala isika.
Misaotra amin'ity lahatsoratra ity. Feno ary mazava be. fiarahabana
Valiny tamin'i DanielCip
Inona no lahatsoratra tsara ary koa mitsikera lahatsoratra mihoatra ny iray amin'ity pejy ity, tsara ny milaza rehefa tsara izy ireo. Miarahaba anao rahalahy aho amin'ny asa tsara. fiarahabana
Pedro Ruiz dia hoy izy:
Famerenana tsara ny lohahevitra. Tokony hamoaka azy amin'ny magazine misy fiatraikany be ianao satria tena feno tokoa. Fiarahabana avy any Mexico.
Valiny tamin'i Pedro Ruiz
Tena tsara, lahatsoratra iray manana kalitao toy izany no tsy hita tao amin'ity tranonkala ity
Diego Villa dia hoy izy:
Lohahevitra toa sarotra, manazava azy amin'ny paoma ianao ary mazava, misaotra, lahatsoratra tsara
Valiny tamin'i Diego Villa
Sergio Cruz  dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara. Misaotra betsaka tamin'ny fotoananao sy nizara azy.
Valiny tamin'i Sergio Cruz 
Ary farany, misy olona manazava zavatra sarotra amin'ny fomba tsotra nefa amin'ny fomba henjana sy lalina. Navoaka tamin'ny fisalasalana be aho. Mpampianatra ianao. Miarahaba anao.